ကလေးနို့တိုက်တဲ့ မိခင်နဲ့ကလေးတွေရဲ. သဘာဝကို အနုပညာဆန်ဆန် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံရိပ်တွေ | Buzzy
ကလေးနို့တိုက်တဲ့ မိခင်နဲ့ကလေးတွေရဲ. သဘာဝကို အနုပညာဆန်ဆန် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံရိပ်တွေ
ကမ္ဘာပေါ်က သဘာဝအကျဆုံးသော ပုံရိပ်တွေလို့ ဆိုရမှာပါ
ဓါတ်ပုံဆရာ Ivette Ivens ဟာ လူထုကြားမှာ မိခင်တွေ ကလေးနို့တိုက်ခွင့်ရရေးကို အလိုရှိသူဖြစ်ပြီး သူဟာ လူကြားထဲမှာ ကလေးအမေတွေ ကလေးကို နို့ချိုတိုက်ကျွေးတာဟာ သာမန်ကိစ္စရပ်ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားစေဖို့ ဓါတ်ပုံတစ်ချို.ကို အနုပညာဆန်ဆန် ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။
ဓါတျပုံဆရာ Ivette Ivens ဟာ လူထုကွားမှာ မိခငျတှေ ကလေးနို့တိုကျခှငျ့ရရေးကို အလိုရှိသူဖွဈပွီး သူဟာ လူကွားထဲမှာ ကလေးအမတှေေ ကလေးကို နို့ခြိုတိုကျကြှေးတာဟာ သာမနျကိစ်စရပျဖွဈကွောငျး ထငျရှားစဖေို့ ဓါတျပုံတဈခြို.ကို အနုပညာဆနျဆနျ ရိုကျကူးခဲ့ပါတယျ။